Home Wararka Xasanadii xildhibaanada oo caawa lagu tuntay albaabadana laga xirtay (Video)
Xasanadii xildhibaanada oo caawa lagu tuntay albaabadana laga xirtay (Video)
Waxaa caawa albaabada laga xirtay xildhibaanada baarlamaanka oo balan la ahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Mursal. Talabadaan ayaa u muuqata mid lagu doonayo in lagu baneeysto kutumashada xasaanada Baarlamaanka iyo xildhibaanada.
Talaabada caawa ay qaaday madaxtooyada ma aha mid dhaawac ku ah xildhibaanada mooshinka qoray laakiin waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dhamaan xildhibaanada qaranka.
Previous articleBeesha Ceyr oo maanta si dhoolus ciidan ah ku soo dhaweeysay C/raxman C/Shakur! (Video)
Next articleWadamada beesha caalamka oo farriin adag u diray MW Farmaajo ugana digay in uu…
Maamulka Hirshabeelle oo si kulul uga hadlay weerarkii dhabagalka ahaa ee...
Heshiiska Wax soo saar wadaagga oo uu Kheyre Amray inaan la...